အင်္ဂလိပ်စကားသင် | ABC Radio Australia
Lesson 1 of 14ပြောင်းရန်
ကမ္ဘာပေါ်က ​လူပြောအများဆုံး ​စကားကို ​ပြောပါဆိုရင် ​အင်္ဂလိပ် ​စကားလို့ပဲ ​ပြောလို့ရပါတယ်။ ​အင်္ဂလိပ်လို့ ​ပြောရာမှာလည်း ​အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်၊ ​သြစတြေးလျ၊ ​ဗြိတိန် ​အင်္ဂလိပ် ​ဆိုပြီးတော့လည်း ​ခွဲထားပါသေးတယ်။ ​လေယူလေသိမ်း ​အသံနေအသံထားသာ ​ကွဲပြားပေမယ့် ​တကယ်တန်းတော့ ​အများကြီး ​မကွာဘူးလို့ ​ပြောလို့ရပါတယ်။ ​တခါ ​အင်္ဂလိပ်စကားခြင်း ​တူပေမယ့် ​နေရာ၊ ​ဒေသနဲ့ ​နိုင်ငံအလိုက် ​ပြောဆို ​သုံးနှုန်းနဲ့ ​အသုံးအနှုန်းတွေဟာလည်း ​ကွာခြား ​တတ်ပါတယ်။ ​နေရာဒေသအလိုက် ​အသုံးအနှုန်းမတူတဲ့ ​စကားလုံး ​၉ ​လုံးကို ​လေ့လာကြရအောင်....
1. ​ဓာတ်ဆီ၊ ​ဒီဇယ်ကို ​Petrol ​ဒါမှမဟုတ် ​gas ​ဆိုပြီး ​နှစ်မျိုးလုံးခေါ်ဝေါ်နိုင်ပါတယ်။
မြောက်အမေရိကားမှာတော့ ​ကားမောင်းရာမှာ ​အသုံးပြုတဲ့ ​လောင်စာဆီကို ​gas ​လို့ ​အသုံးများပြီး ​ဗြိတိန်၊ ​သြစတြေးလျ၊ ​အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာတော့ ​gas ​ဆိုတာကို ​ချက်ပြုတ်ရာမှာ ​အသုံးပြုတဲ့ ​လောင်စာ ​ဓာတ်ငွေ့ ​ကိုသာ ​ဆိုလိုပါတယ်။ ​အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့ ​ကားရဲ့လောင်စာဆီကို ​petrol ​လို့သာ ​ခေါ်ပါတယ်။
2. ​လက်ကိုင်ဖုန်းကို ​Mobile ​phone ​ဒါမှမဟုတ် ​cell ​phone ​ဆိုပြီးတော့လည်း ​ခေါ်ကြပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ​လက်ကိုင်ဖုန်းကို ​hand ​phones ​လို့အခေါ်များပြီး ​သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ ​mobiles/ ​mobile ​phones ​လို့ ​ခေါ်ကြပါတယ်။ ​အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ ​cells ​ဒါမှမဟုတ် ​cell ​phones ​လို့ ​ခေါ်ပါတယ်။
3. ​အမှိုက်ကို ​Rubbish ​ဒါမှမဟုတ် ​trash ​လို့ ​ခေါ်လို့ရပါတယ်။
နေအိမ်မှာ ​ထွက်ရှိတဲ့ ​အမှိုက်တွေကို ​သြစတြေးလျက ​trash ​လို့မခေါ်ပဲ ​rubbish ​လို့ ​ခေါ်ပြီး ​အမှိုက်တွေကို ​အမှိုက်ဗုံး ​rubbish ​bin ​ထဲ ​ထည့်ပါတယ်။ ​ဗြိတိန်နဲ့ ​အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ ​အမှိုက်ဗုံးကို ​dustbin ​လို့ခေါ်ပါတယ်။ ​dust ​ဆိုတာဟာ ​ဖုန်မှုန့်ဖြစ်ပေမယ့် ​ဖုန်မှုန့်တခုတည်းထည့်တာ ​မဟုတ်ပဲ ​အမှိုက်အားလုံးကို ​ထည့်တဲ့ဗုံး ​ဖြစ်ပါတယ်။
4. ​ကလေးချီးခံ ​သေးခံကို ​Nappy ​ဒါမှမဟုတ် ​diaper ​လို့ ​ခေါ်ကြပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ​ကလေးအနှီးတွေ ​မသုံးပဲ ​သေးခံ ​ချီးခံ ​တွေ ​ဝတ်စေတတ်ပါတယ်။
5. ​ကလေးချိုလိမ် ​ကို ​Dummy ​ဒါမှမဟုတ် ​pacifier ​လို့ ​ခေါ်ပါတယ်။
6. ​လူသွားလမ်းကို ​Footpath ​ဒါမှမဟုတ် ​sidewalk ​လို့ ​ခေါ်ကြပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာတော့ ​လူသွားလမ်းကို ​pedestrian ​path ​လို့ခေါ်ပြီး ​သြစတြေးလျမှာတော့ ​footpath ​လို့ခေါ်ပါတယ်။ ​အမေရိကန်ကတော့ ​sidewalk ​ဆိုပြီး ​ခေါ်တတ်ပြန်ပါတယ်။
7. ​သကြားလုံးကို ​Lollies ​သို့ ​sweets ​သို့ ​candy ​လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
ဗြိတိန်နဲ့ ​အိန္ဒိယမှာ ​သကြားလုံးကို ​sweets ​လို့ခေါ်ပြီး ​သြစတြေးလျမှာတော့ ​lollies ​လို့ ​ပိုအသုံးများပါတယ်။ ​အမေရိကန်မှာတော့ ​candy ​လို့ ​အသုံးများပေမယ့် ​ကလေးတိုင်းလိုလိုကတော့ ​သုံးမျိုးစလုံးကို ​နားလည်ကြပါတယ်။
8. ​အာလူးကျော်ကို ​Chips ​ဒါမှမဟုတ် ​fries ​ဒါမှမဟုတ် ​crisps ​လို့လည်း ​ခေါ်ကြပါတယ်။
အာလူးကျော် ​ပူပူတွေကိုတော့ ​french ​fries ​လို့ ​ခေါ်ကြသလို ​hot ​chips ​လို့လည်း ​ခေါ်ကြပါတယ်။
9. ​နေစရာ ​အိပ်စရာ ​ပါတဲ့ ​ယာဉ်ကို ​Caravan ​ဒါမှမဟုတ် ​trailer ​လို့ခေါ်ပါတယ်။
Caravan ​ဟာ ​ကားက ​ဆွဲသွားရတဲ့ ​ယာဉ်ဖြစ်ပြီး ​အမေရိကန်မှာတော့ ​trailer ​လို့ ​အသုံးများကြောင်း ​သိရပါတယ်။ ​နောင်နောင်ကျရင်လည်း ​အင်္ဂလိပ်စာ ​အတူတူ ​လေ့ကျင့်ရအောင်။